प्रणय दिवस विशेष : यी हुन् नेपालका चर्चित कलाकारहरुको प्रेम जोडी !
प्रेम दिवसका दिन प्रेम जोडीहरु एकापसमा उपहार आदान–प्रदान गर्दै माया साटासाट गर्ने गर्छन
बुद्धबार, २ फागुन २०७४, सगरमाथा पोष्ट
आजको दिन प्रेम जोडिहरुका लागि खास दिन रहेको छ । फेब्रुअरी १४ का दिन प्रेम जोडीहरु एकापसमा उपहार आदान प्रदान गर्दै माया साटासाट गर्ने गर्छन ।
प्रेममय दिवसका दिन हामी नेपाली चलचित्र क्षेत्रका केहि विशेष प्रेम जोडीहरुको बारेमा चर्चा गर्छाै । यी हुन् नेपाली सिने जगतका चर्चित प्रेम जोडीहरु !
नम्रता श्रेष्ठ र दावा स्टेफिन शेर्पा
नायिका नम्रता श्रेष्ठ व्यावसायी दावा स्टेफिन शेर्पाको प्रेममा परेको लामो समय भैसकेको छ । फिल्म ‘पर्व’को प्रेसमिटमा नम्रताको प्रेम दावासँग रहेको सार्वजनिक भएको थियो । ओपन रिलेसनसिपमा रहेपनि नम्रता आफ्नो प्रेम सम्बन्धबारे भने मिडियामा खुलेर बताउदिनन् ।
बर्षा राउत र संजोग कोइराला
चर्चित प्रेम जोडीमा नायिका बर्षा राउत र नायक संजोग कोइराला पनि पर्छन । ओपन रिलेसनसिपमा रहेको यो जोडी एक अर्काको खुब केयर गर्दछन् । यी जोडी प्रेम सम्बन्धको बारेमा पनि मिडियामा खुलेर बताउने गर्छन । बर्षा फिल्ममा व्यस्त हुँदा संजोग आफ्नै व्यावसायमा व्यस्त छन् ।
नायिका प्रियंका कार्की र नायक आयुष्मान देशराज जोशीको जोडी चर्चा पछिल्लो समय निकै नै रहेको छ । उनीहरु ‘कथा काठमाण्डू’ नामक फिल्म खेल्दै गर्दा प्रेममा परेका थिए ।
थुप्रै म्युजिक भिडियो र विज्ञापनमा एकसाथ काम गरेका उनीहरु विवाहको समेत मनस्थितिमा रहेको उनीहरु निकट पारिवारिक स्रोतले बताएको छ ।
सौगात मल्ल र सृष्ट्रि श्रेष्ठ
नायक सौगात मल्ल र मिस नेपाल समेत भएकी नायिका सृष्टि श्रेष्ठबीचको प्रेम चर्चा हुने गर्दछ । सृष्ट्रिलाई सुटिङमै सौगात भेट्न गएको देखि एयरपोर्टमा लिन गएको खबर मिडियामा सार्वजनिक भएका छन् । सृष्ट्रिसँगको प्रेमलाई मिडियामै स्विकार गरेका सौगातले छिट्टै विवाह समेत हुने बताएका छन् ।
साम्राज्ञीराज्य लक्ष्मी शाह र मयंक खड्का
पछिल्लो समयकी चर्चित नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह मयंक खड्का नामक युवकसँगको प्रेममा छिन् । यद्यपी उनले आफ्नो प्रेम बारे मिडियामा केही बोलेकी छैनन् । फ्यानहरु माझ साम्राज्ञी र मयंकको जोडी चर्चित छ । मयंक दरबारमार्गमा रहेको चर्चित डेजाभू क्लबका सेयर होल्डर हुन् । साम्राज्ञी र मयंकको जोडी सामाजिक सञ्जालबाट भने लुक्न सकेको छैन ।
सदाबहार अभिनेता भुवन केसी र नायिका जिया केसीको प्रेम सम्बन्धको बारेमा पनि पछिल्लो समय मिडियामा आइरहेका छन् । एकाध फिल्मको प्रिमियरमा एकसाथ देखिने भुवन र जिया ‘कृ’ फिल्म युनिटसँगै स्कटल्याण्ड पुगेर फर्किए । उनीहरु लिभिङ टुगेदरमा रहेका छन् ।
संयम पुरी र आश्मा डिसी
नायक संयम पुरी र नायिका आश्मा डिसीको प्रेम लामो समयदेखि चलिरहेको छ । आश्मा भिजे हुँदै संयमसँग प्रेम बसेको थियो । यो क्युट जोडीले फिल्म आभाषमा एकसाथ काम गरेको छ । उनीहरुको जोडी युवा पुस्तामाझ चर्चित एवं हिट पनि रहेको छ ।
सलोन बस्नेत र करिश्मा श्रेष्ठ
पूजा शर्मा र सुदर्शन थापा
नायिका पूजा शर्मा र निर्देशक सुदर्शन थापा बीचको प्रेमसम्बन्धबारे पनि नेपाली चलचित्र उद्योगमा चर्चा हुने गर्दछ । तर आफ्नो प्रेम बारे यी दुवै मिडियामा मौन छन् । आफ्नो प्रेमलाई खुला रुपमा स्विकार गरेका छैनन् । ‘मधुमास’देखि रामकहानीसम्म सुदर्शनकै निर्देशनमा पूजाले फिल्म खेलिरहेकी छिन् ।
सलिनमान बनियाँ र अस्प्रिना श्रेष्ठ